Pieces ofaWoman (2021) | MM Movie Store
သာယာတဲ့အိမျထောငျရေးတဈခုမှာ သားသမီးဆိုတဲ့ဆညျးလညျးတဈခုတော့ မဖွဈမနလေိုအပျပါတယျ။ ကလေးအငျမတနျလိုခငျြနရှောတဲ့ Seanနဲ့ Marthaတို့ဇနီးမောငျနှံကလညျး သူတို့ဘဝထဲဝငျရောကျလာမယျ့ ရငျသှေးလေးကိုတှေးရငျး ဝမျးသာပီတိဂှမျးဆီထိနကွေတာပေါ့။
ဒါပမေဲ့လောကကွီးက ဒီဇနီးမောငျနှံကို မကျြနှာသာမပေးခဲ့ပါဘူး။ Marthaကလေးမှေးမယျ့နမှေ့ာပဲ သူတို့ပွနကွေဖွဈတဲ့သားဖှားဆရာမ Barbaraဟာ တခွားတဈယောကျကို ကလေးမှေးပေးနတေဲ့အတှကျ Evaဆိုတဲ့သားဖှားဆရာမကို အစားလှတျပေးလိုကျရာက သမီးလေးကို မှေးမှေးပွီးခငျြးမှာပဲ လကျလှတျဆုံးရှုံးလိုကျရပါတယျ။
မြှျောလငျ့ခကျြရောငျခွညျပြောကျဆုံးသှားတဲ့မိခငျလောငျး Martha တဈယောကျ နှေးထှေးဖျောရှတေတျသူအဖွဈကနေ အေးတိအေးစကျဖွဈသှားပွီး အိမျထောငျရေးကလညျး အေးစကျသှားပါတော့တယျ။
ဒီအချြနျမှာ သမီးလေးကိုဆုံးရှုံးရတာက သားဖှားဆရာမကွောငျ့ဆိုတာသိသှားပွီး Martha ရဲ့အမဖွေဈသူက Negligence နဲ့ သားဖှားဆရာမEvaကို တရားစှဲဆိုဖို့ အကွံပွုလာတဲ့အခါမှာတော့….
သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုမှာ သားသမီးဆိုတဲ့ဆည်းလည်းတစ်ခုတော့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးအင်မတန်လိုချင်နေရှာတဲ့ Seanနဲ့ Marthaတို့ဇနီးမောင်နှံကလည်း သူတို့ဘဝထဲဝင်ရောက်လာမယ့် ရင်သွေးလေးကိုတွေးရင်း ဝမ်းသာပီတိဂွမ်းဆီထိနေကြတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့လောကကြီးက ဒီဇနီးမောင်နှံကို မျက်နှာသာမပေးခဲ့ပါဘူး။ Marthaကလေးမွေးမယ့်နေ့မှာပဲ သူတို့ပြနေကြဖြစ်တဲ့သားဖွားဆရာမ Barbaraဟာ တခြားတစ်ယောက်ကို ကလေးမွေးပေးနေတဲ့အတွက် Evaဆိုတဲ့သားဖွားဆရာမကို အစားလွှတ်ပေးလိုက်ရာက သမီးလေးကို မွေးမွေးပြီးချင်းမှာပဲ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။
မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မိခင်လောင်း Martha တစ်ယောက် နွေးထွေးဖော်ရွေတတ်သူအဖြစ်ကနေ အေးတိအေးစက်ဖြစ်သွားပြီး အိမ်ထောင်ရေးကလည်း အေးစက်သွားပါတော့တယ်။
ဒီအခ်ျန်မှာ သမီးလေးကိုဆုံးရှုံးရတာက သားဖွားဆရာမကြောင့်ဆိုတာသိသွားပြီး Martha ရဲ့အမေဖြစ်သူက Negligence နဲ့ သားဖွားဆရာမEvaကို တရားစွဲဆိုဖို့ အကြံပြုလာတဲ့အခါမှာတော့….
IMdb 6.7 နဲ့ Rotten tomatoes 76%အထိ ratingကောင်းတွေရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် သူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့အကြောင်းအရင်းဟာ သူမရဲ့ရင်သွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Pieces ofaWomanဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်လေးကို ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ရအောင်လား။